အမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာပျော်စရာ FAP / NoFap စမ်းသပ်မှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာပျော်စရာ FAP / NoFap စမ်းသပ်မှု
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုငါသည်သင်တို့ကိုသုက် dont သောအခါအသင်သို့မဟုတ်မရစေခြင်းငှါ, စေခြင်းငှါ, အာရုံနှင့်စပ်လျဉ်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု 10 ရက်သတ္တပတ်ကြာခဲ့သည်။ ငါမှာအားလုံး fapping မဟုတ်5ရက်သတ္တပတ်ကုန်နေ့တိုင်း fapping5ရက်သတ္တပတ်နေခဲ့ရသည်။ ငါ့အသက်ကို: အားကစားရုံ, နိုက်ကလပ်တစ်ချိန်ကစဉ်အတွက်လမ်းများလမ်းလျှောက်, မြို့နဲ့ဆိုင်ကိုသွား, အလုပ်သို့သွားပါ။
ငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင့်ရှိသည်နှင့်တစ်ပါတ် 10 အမျိုးသမီးစာရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း fapping လိုက်တဲ့အခါ:
Week1:2/ 10 မိန်းကလေးများအဘယ်သူမျှမရက်စွဲတစ်ခုအဘို့အတက်, အွန်လိုင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 0, ကျပန်းစကားပြောဆိုမှုအစပျိုး: 0
Week2: 1 / 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းတုံ့ပွနျဘယ်နေရာမှာတတ်၏။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 0, ကျပန်းစကားပြောဆိုမှုအစပျိုး: 0
အပတ်က 3:2/ 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းတုံ့ပွနျဘယ်နေရာမှာတတ်၏။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 0, ကျပန်းစကားပြောဆိုမှုအစပျိုး: 0
အပတ်က 4:3/ 10 မိန်းကလေးတွေသူတို့ထဲကတဦးတည်းတက်တွေ့ဆုံရန်ရှိသော်လည်းအလွှာဖို့လိုလား, အွန်လိုင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 0, randonly ပြောဆိုမှုများစတင်ရန်: 1 ကျွန်မသူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်ကလပ်မှထွက် သွား. အခါ။ ကျနော်တို့အထဲကလုပ်ပေမယ့်ဘာမျှမပို။
အပတ်က 5:2/ 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းကိုတုံ့ပြန်ငါတဦးတည်းအတူတက်တွေ့ဆုံရန်, ဒါပေမယ့်ဘာမျှ happends ။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 0: 0, စကားစမြည်စတင်ပါ။
အပတ်က 1: 1 / 10 မိန်းကလေးငယ်များ, အွန်လိုင်းမျှ meetup တုံ့ပြန်ကြသည်။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ:0။ 1: စကားပြောဆိုမှု Initiate
အပတ်က 2:2/ 10 မိန်းကလေးငယ်များ, အွန်လိုင်းမျှ meetup တုံ့ပြန်ကြသည်။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ:0။ 0: စကားပြောဆိုမှု Initiate
အပတ်က 3:5/ 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းတုံ့ပွနျ3ဘာတစ်ခုမှတွေ့ကြံ, ငါသည်2နှင့်အတူ makeout, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးဘာမျှမ။ ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 5, စကားပြောဆိုမှုအစပျိုး: 3
အပတ်က 4:5/ 10 မိန်းကလေးငယ်များငါ3ကျပန်း Girl အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာရ, အွန်လိုင်းကိုတုံ့ပြန်, ငါသည်ဤအရများသောအားဖြင့်ဘယ်တော့မှမ။ ကျပန်းတပြင်လုံးကိုတပတ်4စဉ်အတွင်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 10: 5, စကားလက်ဆုံတစ်ရပ်ကိုစတင်ပါ။ ငါအပြင်ဘက်လမ်းလျှောက်နေ့တိုင်းတစ်ကြာရှည်အချိန်များအတွက်ငါ့ကိုရှာနေအချို့သောမိန်းကလေးလည်းမရှိ။
အပတ်က 5:7/ 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ ငါ facebook ကိုပေါ်စကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်နှစ်များတွင်မှပြောဆိုသော havent ဘယ်သူကိုနှစ်ဦးကိုမိန်းကလေးငယ်ငါ3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါ၏အဟောင်းထဲကနေကျပန်းစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုရ? ကျပန်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ: 7, စကားပြောဆိုမှုအစပျိုး: 2
1 / 10 မိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းကိုတုံ့ပြန်: ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့။ ကျပန်းကြည့်တဲ့သူမိန်းကလေးများ:0။ 0: စကားပြောဆိုမှု Initiate ။
ဤသူကားငါအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်, ထိုရိုးသားအမှန်တရား 100% ဖြစ်တယ်, သင်လိုချင်သောသို့သော်သူကရှင်းပြပါ။
LINK - ငါသည်ဤရလဒ်သည်အဆိုပါကောလဟာလသတင်းများအရအမျိုးသမီးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. , fapping / nofap တစ် 10 ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်မှုပြုလေ၏။